अजित मिजार हत्या घटनाः साढे ४ वर्षपछि तेश्रोपटक पुनः शव परीक्षण गर्न आदेश - Everest Dainik - News from Nepal
अजित मिजार हत्या घटनाः साढे ४ वर्षपछि तेश्रोपटक पुनः शव परीक्षण गर्न आदेश
गैरदलित युवतीसँग प्रेमविवाह गर्दा हत्या गरिएका काभ्रेका युवक अजित मिजारको शव पुनः परीक्षण हुने भएको छ । पाटन उच्च अदालतले उनको शव पुनः परीक्षण गर्न आदेश दिएको हो ।
अजितको शव शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा रहेको छ । यसअघि दुईपटक पोस्टमार्टम भइसकेको हो । झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका अजितको अनुहार कालो–निलो भएको थियो । कपाल खुइलिएको थियो । तर, दुईपटक पोस्टमार्टम हुँदा पनि त्यसबारे परीक्षण नै भएको थिएन । पोस्टमार्टममा संलग्न डा. रिजेन श्रेष्ठले ‘मृतकको शरीरमा घाउचोटहरू थिए, नीलडाम थिए’ भनी बयान दिएका थिए भने डा. अमृता श्रेष्ठले ‘शरीरमा घाउचोट थिएन, तर मृतकको अनुहार नीलो थियो’ भनी बयान दिएकी थिइन् ।
मुद्दाका वादी पक्षले मृतकको शरीरमा घाउचोट र नीलडाम भए/नभएको र अनुहारमा एसिडजन्य रसायन छ्यापिएको विषयमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सरलाकुमारी पाण्डेको संयुक्त इजलासले शव पुनः परीक्षण गर्न सोमबार आदेश दिएको हो । अदालतले अजितको अनुहारमा पोतिएको रासायनिक पदार्थबारे परीक्षण गर्न आदेश दिएको अधिवक्ता मोहन शाशंकरले बताए ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा दलित आन्दोलनका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि प्रचण्डले मिजारको हत्याको उच्चस्तरीय अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए
Feature Photo: KALPANA KHANAL, GPJ NEPAL
ट्याग्स: अजित मिजार